बिस्मिल्ला खाँन - विकिपिडिया
खाँन कन्सर्टमा १९६४
(१९१६-०३-२१)२१ मार्च १९१६
२१ अगस्ट २००६(२००६-०८-२१) (९० वर्ष)
आफेक हैदर, सबिता आनन्द
जामिन हुसैन खाँन
उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ (अङ्ग्रेजी: Bismillah Khan, जन्म: २१ मार्च, १९१६ - मृत्यु: २१ अगस्त, २००६) हिन्दुस्तान को प्रख्यात शहनाई वादक थिए। उनको जन्म डुमराँव, बिहार मा भएको थियो। सन् २००१ मा उनलाई भारत को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्नबाट सम्मानित गरियो।
उनी तेश्रो भारतीय संगीतकार थिए जसलाई भारत रत्नबाट सम्मानित गरिएको छ।
२ धार्मिक विश्वास
४ यसलाई पनि हेर्नुहोस
बिस्मिल्ला खाँको जन्म बिहारी मुस्लिम परिवारमा पैगम्बर खाँ और मिट्ठन बाई को यहाँ बिहारको डुमराँव की भिरंग राउत की गली नामक मोहल्ले मा भएको थियो। उनको केटाकेटीको नाम कमरुद्दीन थियो। उनी आफ्नो बाबु-आमाको दोश्रो सन्तान थिए। किनकी उनको दाजुको नाम शमशुद्दीन थियो अत: उनको हजुरबुबा रसूल बख्शले भने-"बिस्मिल्लाह!" जसको मतलब थियो "राम्रो सुरुवात! वा श्रीगणेश" अत: घरका मनिसहरूले यही नाम राखिदिए। र आगाडी गएर उनी "बिस्मिल्ला खाँ" को नामबाट प्रशिद्द भए। 
उनको मानिसहरु दरवारी राग बजाउनमा सिद्दहस्त थिए जो बिहारको भोजपुर रियासत मा आफ्नो संगीतको हुनर देखाउनको लागि अक्सर जाने गर्दथे। उनको पिता बिहारको डुमराँव रियासतको महाराजा केशव प्रसाद सिंहको दरवारमा शहनाई बजाउने गर्दथे। ६ वर्षको उमेरमा बिस्मिल्ला खाँ आफ्नो बुबाको साथ बनारस आए। त्यहा उनले आफ्नो काका अली बख्श 'विलायती'बाट शहनाई बजाउन सिखे। उनको उस्ताद काका 'विलायती' विश्वनाथ मन्दिर मा स्थायी रूपमा शहनाई-वादन का काम गर्दथे।
यद्यपि बिस्मिल्ला खाँ शिया मुसलमान थिए तर पनि उनी अन्य हिन्दुस्तानी संगीतकारहरु सरह धार्मिक रीति रिवाजहरूको प्रबल पक्षधर थिए र हिन्दू देवी-देवतामा कुनै फरक नहीं समझदैन थिए। उनी ज्ञानको देवी सरस्वती को सच्चा आराधक थिए।  उनी काशी को बाबा विश्वनाथ मन्दिरमा गएर त शहनाई बजाउद थिए यसको अलावा उनी गंगा किनारे बसेर घण्टौ रियाज पनि गर्ने गर्दथे। उनकी आफ्नो मान्यता थियो कि उनलाई यस्तो गर्दा गंगा मइया प्रसन्न हुन्छिन।
↑ १.० १.१ Bismillah Khan: The Shehnai Maestro by Neeraja Poddar, Rupa & Co., New Delhi, 2004
↑ "Biography of Ustad Bismillah Khan - from GeoCities", मूलबाट २००५-०५-२१-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २००६-०८-२४।
↑ "Rediff Slides on Ustad Bismillah Khan", अन्तिम पहुँच २००६-०८-२१।
↑ "BBC on Ustad Bismillah Khan", BBC News, २००६-०८-२१, अन्तिम पहुँच २००६-०८-२१।
विकिमिडिया कमन्समा बिस्मिल्ला खाँन सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=बिस्मिल्ला_खाँन&oldid=919033" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २२:४४, १२ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।